Laanta Socdaalka Sweden oo safar baaritaan ah ku tagtay Malta | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden ayaa safar xog uririn ah ku tagtay Malta si ay wax uga ogaadaan xaalada ay ku nool yihiin qoxootiga ku nool Malta. Laanta Socdaalka ayaa sheegtay in ay ku soo arkeen socdaalkooda in xaalada ay ku sugan yihiin dadka waaweyn ee qoxootiga ku ah Malta ay liidato ayadoo goobaha lagu hayo dadka ay yihiin kuwo aad ciriiri u ah isla markaana nadaafad xumo ay ka jirto. Balse Laanta Socdaalka ayaa amaantay sida loola dhaqmo caruurta iyo dadka da'da yar isku dhiiba, ayadoo sheegtay in ay hestaan nolol fiican oo ay helaan caafimaad iyo waxbarasho. Sidoo kale Laanta Socdaalka ayaa sheegtay dadkii ay Sweden ku celisay Malta ay ku nool yihiin xaalad fiican kuwooda caruurta ah.
Laanta Socdaalka Sweden ayaa safar xog uririn ah ku tagtay Malta si ay wax uga ogaadaan xaalada ay ku nool yihiin qoxootiga ku nool Malta.
Laanta Socdaalka ayaa sheegtay in ay ku soo arkeen socdaalkooda in xaalada ay ku sugan yihiin dadka waaweyn ee qoxootiga ku ah Malta ay liidato ayadoo goobaha lagu hayo dadka ay yihiin kuwo aad ciriiri u ah isla markaana nadaafad xumo ay ka jirto.
Balse Laanta Socdaalka ayaa amaantay sida loola dhaqmo caruurta iyo dadka da’da yar isku dhiiba, ayadoo sheegtay in ay hestaan nolol fiican oo ay helaan caafimaad iyo waxbarasho.
Sidoo kale Laanta Socdaalka ayaa sheegtay dadkii ay Sweden ku celisay Malta ay ku nool yihiin xaalad fiican kuwooda caruurta ah.